Axmad madoobe oo dib u doorashadiisii kadib markii u horeysay safar uga baxay Kismaayo - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Axmad madoobe oo dib u doorashadiisii kadib markii u horeysay safar uga baxay Kismaayo
Axmad madoobe oo dib u doorashadiisii kadib markii u horeysay safar uga baxay Kismaayo
November 24, 2019 Duceysane447
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa saaka u ambabaxay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kaasoo ah safarkiisa u horeeyay ee uu uga ambabaxo magaalada Kismaayo, kaddib doorashadii bishii Agosto ee dib loo doortay xilka Madaxweynaha Jubbaland.
Diyaarad gaar ah ayaa wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Jubbaland saaka ka qaaday magaalada Kismaayo, iyagoo toos uga degaya magaalada Nairobi, taasoo mar kale jebineysa amarkii dowladda Soomaaliya ee ahaa in diyaaradaha aada iyo kuwa ka baxa ay soo maraan Muqdisho.
Safarka Madaxweynaha Jubbaland ee Nairobi ayaa la xiriira arrimo siyaasadeed iyo khilaafka ka jira Jubbaland, gaar ahaan arrinta ka taagan Gedo.
Axmed Madoobe ayaa la filayaa inuu kula kulmo Nairobi siyaasiyiin ka soo jeeda Gobolka Gedo oo uu ku jiro Guddoomiyaha Gobolkaas, sidoo kale waxaa la filayaa inuu ka kulmo Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa muddooyinkii u dambeeyay wajahayay cadaadis uga imaanayay dhanka dowladda Federaalka oo markaan culeys saartay dhanka Gedo, kaddib markii maamulada saddex degmo oo kala ah Beledxaawo, Luuq iyo Doolow ay dowladdu ka sameysay dhaq dhaqaaq siyaasadeed iyo mid milateri, iyadoo la sheegay in dhaq dhaqaaqa Milateri ay qeyb ka yihiin Ciidamada Itoobiya.
Deg deg:Muxaadaradii shiikh Umal bari qaban lahaa oo markii labaad baaqatay
Dowlada federaalka oo ka digaysa Fatahaado horleh oo dalka ka dhaca